» Uganda oo ku qaabday in la kordhiyo waqtiga Ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya Boga Hore SOOMAALIYA
Mucaaradka Jabuuti oo eedeeyay Madaxweyne Ismaaciil Geelle
Gudiga dowladda ee Jubooyinka oo sheegay inay ay u dhamaatay shaqadii Kismaayo
Gudoomiyaha Sh/hoose oo sheegay inay dagaal ku qaadayaan Baraawe
Madaxda IGAD oo kasoo horjeestay Jubaland soona saaray baaq
Uganda oo ku qaabday in la kordhiyo waqtiga Ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya
January 14, 2013 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareGeneral Katumba Wamala oo ah taliyaha Ciidamada Dhulka ee Uganda ayaa sheegay in loo baahanyahay in la kordhiyo mudda howlgalka AMISOM ee Soomaaliya si loogu guuleysto soocelinta xasiloonida Soomaaliya.
Janaraalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay hada koreyso islamarkaana ay u baahantahay caawinaad balaaran si ay u haleesho wada ay dooneyso in ay kaga gudubto dhibtaada mudada ay ku soo jirtay.
Katumba Wamala ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay soo koreyso ayna u baahantahay in lagacan qabto si ay uga baxdo dhibtaada heysata waxana uu muujiyay in laga maamaarmaan ay tahay in la gaareero dowladda cusub ee Soomaaliya.
Howlgalka AMISOM ayaa waxa uu waqtigiisu ku egyahay bishan March ee sanadka 2013ka waxana waqtigooda kordhinkara Midowga Africa iyo Qaramada Midoobay.
3 Responses to Uganda oo ku qaabday in la kordhiyo waqtiga Ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya
fodcade says:	January 14, 2013 at 17:05	Asc
Reply	Asad says:	January 14, 2013 at 19:09	Hadii lokordhiyo , maxu malenayaa inu faido kahelaya . Walee ciqaabta idinsikordheysa . Islamiyinta waxay kufidiyadan dafaha dunida
Reply	m.dhego says:	January 15, 2013 at 16:10	waa dhab aad ayaan so dhawaynayna in la kordhiyo cidamamada aan walaalaha nahay waxan leeyahay ha la ogolaado in mudada lo kordhiyo waayo taasi hadi aan nahay shacabka somaliyeed waa mustaqbalkayaga guul guul